Izibonelelo kunye nezimo ezichaseneyo ne-aquaculture -I- | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Izibonelelo kunye nezimo ezichaseneyo ne-aquaculture -I-
Ukujongana nobuhlwempu be- izinto ezahlukeneyo zenzululwazi elwandle, kutheni ungabheneli kwicultacacure? Uninzi lweesalmon ezithengiswa eJamani zivela kwi lwamanzi. Nangona kunjalo, lo mkhwa uneengxaki ezinkulu, abafuyi bahlala bebhenela kwiziyobisi kwaye amanzi angcoliseka yinkunkuma yendalo. Ngaphandle kwayo yonke into, iingcali ezithile ziyacenga ukuba iifama zasemanzini azizukuba yindlela yokukhusela iilwandle nje kuphela, kodwa zikwayindlela yokondla abantu. labantu ngokusemthethweni isoloko isanda.
1 Umthombo weprotheni
2 Inye kwintlanzi ezimbini ivela kwi-aquaculture
3 Isenzo esiqhubeka sigxekwa ngoososayensi bezendalo
Kulo ukondla lomntu, Intlanzi ngumthombo ophambili weprotheni, ngaphambi kweenkukhu kunye nehagu. Ngapha koko, namhlanje ivumela i-17% yabantu ukuba igubungele iimfuno zabo zeprotheyini. Kwiminyaka eli-10 okanye eli-15, ibango liya kuba liphindaphindwe ngo-2 iimfuno protein yenani labemi elandayo. Ulwandle lwaselwandle ngenene luncedo kakhulu kunolimo lweehagu okanye lweenkomo, kuba iintlanzi kunye nezinye izinto eziphila elwandle zondla ngaphantsi kweentlanzi. lwanyana yasemhlabeni.
Ukuvelisa ikhilo ye inyama yenkomo Umzekelo, kuthatha ukutya okuphindaphindwe kalishumi elinesihlanu kunokuvelisa ikhilogram yekhaphethi. Iintlanzi zisebenzisa amandla amancinci kuneentlanzi. lwanyana yasemhlabeni, Kwaye oku ngenxa yezizathu ezibini. Kwelinye icala, zizilwanyana ezinegazi elibandayo, iqondo lobushushu langaphakathi liziqhelanisa kakuhle kakhulu nendalo ezihlala kuyo. Kwaye kwelinye icala, ukuhamba kwindawo enamanzi kufuna umgudu omncinci.
Inye kwintlanzi ezimbini ivela kwi-aquaculture
Ngokwe-United Nations Food and Agriculture Organisation, isiqingatha seentlanzi esizenza kumacwecwe ethu namhlanje asizizo iintlanzi zasendle. Nangona kunjalo, ukubaluleka kwe- lwamanzi yahluka ngokwamazwe. Kumbindi weYurophu, njengaseJamani, iintlanzi zasendle zezona zifunwa kakhulu. Nangona kunjalo, e-China, i-aquaculture lisiko elineminyaka eliwaka ubudala elaliqala ukubuyela ekuhlaleni kweentlanzi. iintente. Kude kube namhlanje, i-China ngokungathandabuzekiyo lilizwe lokuqala kule nkxaso-mali, inikezela phantse isibini kwisithathu semveliso yeentlanzi zehlabathi lwamanzi.
Isenzo esiqhubeka sigxekwa ngoososayensi bezendalo
Njengoko acuyiisiko njengoko ikhula, iphakamisa ukugxeka okungakumbi nangokwezemvelo, kuba iyenze mandundu ingxaki yokuloba kakhulu endaweni yokusombulula. Ewe, uninzi lweentlobo zokuzingela ziyazitya, kwaye zondla kwezinye iintlobo zentlanzi ekulotywa kuzo phakathi endalo. Ukufuya ityhuna yasemanzini yeyona ntlekele inkulu, kuba ngokungafaniyo nesalmon, olu hlobo alunakho ukuzala lusekuthinjweni. Amafama ke ngoko abamba ii-tunas ezincinci zasendle kwaye abondle ngazo intlanzi kubiza ubanjwe elwandle. Itshixiwe kwiikhetshi, ii-tunas azinalo ithuba lokuvelisa kwakhona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » I-ecology » Ezolimo zendalo » Izibonelelo kunye nezimo ezichaseneyo ne-aquaculture -I-
Iipesenti ezingama-80 zamanzi aseTshayina angcoliswe kakhulu ukuba angasela
Amahlosi abhengeze ukuba ayisekho eCambodia